« Arovy ny ala honkontsika ! » | NewsMada
Covid-19 – Tsy fanarahan-dalàna: saofera sy resevera 70 mahery naiditra “violon”
Non-respect des dispositifs sanitaires: 86 chauffeurs placés en garde à vue 43 taxi-be mis en fourrière
Firongatry ny valanaretina tao anatin’ny roa andro: roa ny matin’ny covid-19, 156 ny tranga vaovao
Covid-19: un nouveau centre de test à Andohatapenaka
Lozam-pifamoivoizana – RN 1: tsy avotra, maty kilan’ny afo ilay lehilahy mpitondra moto
« Arovy ny ala honkontsika ! »
Par Taratra sur 10/09/2019
« Arovy ny ala honkontsika ! ». Niara-nisalahy tamin’izany ny WWF (Fonds mondial pour la nature), ny minisiteran’ny Fiaraha-miasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana any Alemaina ary ny UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Niainga avy amin’ny fanadihadiana ny sarintany azo tamin’ny zanabolana, teo anelanelan’ny 1995 sy 2018, ny tetikasa.
Sarin-tany mampiseho ny toerana misy azy sy ny zava-misy ankehitriny manerana ny Nosy. Hita fa nihena io karazan-kazo io, 236 400 ha tamin’ny taona 2018, raha nisy 294 387 ha, ny taona 2000. Fantatra fa tsara kokoa izay ala tantanin’ny fokonolona amin’ny ankapobeny. Hitan’ny WWF izany, hatramin’ny taona 2007 niarahany niasa tamin’ny fokonolona ho fiarovana sy famerenana ny ala honko any amin’ny faritra Menabe, Melaky, ary Diana. Fitambarany, 50 000 ha ny ala voaaro tantanin’ny fokonolona ; roa tapitrisa ny hazo voavoly, ny taona 2007 hatramin’ny 2017.
16 ny fikambanana mandray andraikitra, any amin’ireo faritra ireo, amin’ny fiarovana, mahazo fanohanana avy amin’ny WWF sy ny fikambanana miaro ny tontolo iainana. « Tsy mahazo fankatoavana ny fiarovana ny ala honko raha tsy voaporofo ara-tsiantifika sy ara-potoana , sy ny fampiharana ny lalàna mifandraika amin’ny fiarovana azy », hoy ny talen’ny WWF, Ratsifandrihamanana Nanie. Manantana ny WWF, sy ireo vahiny nanao ny fikarohana fa hanome lanja io zavaboahary io ny rehetra ka handray andraikitra ho fiarovana azy.
Mampanahy tanteraka ny fihanaky ny covid-19: Tafakatra 22 ny maty, tranga vaovao 88 eto Analamanga 02/07/2020
Test de dépistage: Ruée vers le centre médical à Andohatapenaka 02/07/2020
famokarana lohamenaka: hampiasana teknolojia vaovao 02/07/2020
Ambanja: tratran’ny mpanjono ny famotehana ala honko 02/07/2020
Tatitry ny PNUD: toekarena reraky ny krizy politika sy ny andro ratsy 02/07/2020